अमेजन TOP खोजहरू बन गर्ने तरिकाहरू के हो?
अमेजन TOP खोजकर्ताहरू कसरी गर्ने भन्ने बारे राम्रो विचार प्राप्त गर्न, तपाईंलाई अमेजनमा बेच्ने कुरा के स्पष्ट तस्वीर पाउन आवश्यक छ। निश्चित रूपमा तपाइँ आफ्नो मार्केटिंग अभियान सही ढंगले निर्माण गर्न यो अनुकूलन पहलुहरु हेर्नको लागि यो पोष्टलाई हेर्नुहोस्। यो पोष्टले तपाईंको आँखा अमेजन खजाना ट्रकमा खुल्यो र तपाईलाई कुनै प्रयास बिना पैसा उठाउन मद्दत गर्नेछ।
अमेजन बेचन को मूल बातें
उत्पादनको मुख्य पृष्ठमा नेभिगेट गर्नुहोस् र त्यसपछि उपलब्ध उपलब्ध प्रस्तावहरूको जाँच गर्न उत्पादन विवरण तल प्रस्तुत प्रस्तावहरूमा क्लिक गर्नुहोस्। तथापि, पहिलो कुरा अमेजन बिक्रेताहरू प्रायजसो खरिद बक्स हो। यो सेक्शन बजार आला भित्रको सबैभन्दा राम्रो संस्करण प्रदर्शित गर्दछ। सांख्यिकीय डेटा अनुसार, अमेजनको 62 अर्ब अमेरिकी डलरको 56 अरब अमेरिकी डलर श्रोताहरूले उनीहरूको अमेजन छनौटमा भरोसा गर्न सक्छन् किनकि यसले मूल्य, गुणस्तर, प्रासंगिकता, र यति जस्ता विभिन्न पक्षहरू लिन्छ। खरिद बाकस प्रयोग गरेर, ग्राहकहरूले उनीहरूको खरिद गर्ने अधिकारहरूको उत्पादनहरू थपेर आफ्नो खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छन्।
अमेजनमा उच्च प्रतिस्पर्धाको कारण, यो एक आसान कार्य होइन कि बिक्रेता बिक्रेता हुन जसले खरीद बक्स जित्छ। यसको अर्थ छैन कि यदि तपाई अमेजन SERP मा उच्च श्रेणीमा हुनुहुन्छ भने, तपाईं एक विशेष बिक्रेता बन्नुहुनेछ। खरिद बक्स जित्नको लागि, तपाईंलाई अमेजन दिशानिर्देशहरूको पालना गर्न र तपाईंको ग्राहकहरूको लागि मूल्यवान हुन आवश्यक छ।
कारकको असर गर्ने प्रस्ताव सूचीमा देखा पर्दछ:
तपाईंलाई खरिद बक्स जित्न प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान गर्न आवश्यक छ। यसमा न केवल उत्पादन लागत तर शिपिंग लागत पनि समावेश गर्दछ। अमेजनमा आवश्यक उत्पादनहरू खोज्दै शेल्डरहरूले सबै मूल्यहरूको तुलना गर्न सक्छन् र प्रायजसो बजारमा सबैभन्दा कम मूल्य चयन गर्न सक्छन्। आफ्नो मूल्य प्रतिस्पर्धी राख्न को लागी, तपाईं नियमित आधार मा प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। यसबाहेक, यो प्रत्याशित उपकरणहरू प्रयोग गर्न उचित छ।
तपाईंको प्रस्तावहरू प्रतिस्पर्धा गरिनु पर्छ किनकि अधिक बिक्रेताहरू यहाँ छन्, यो शीर्षमा पर्दछ।
अमेजनमा खरिद बक्स जित्नको लागी तपाईसँग लामो र सकारात्मक बिक्री इतिहास हुनु पर्दछ। अमेजनले तपाईंको ग्राहक समीक्षा र प्रति महिना खरिदहरूको औसत संख्या खातामा लिन्छ। नियमको रूपमा, हालैका अमेजन बजारहरूमा हालैका उत्पादनहरू देखा पर्न सक्दछ।
थुप्रै विशेषताहरूले विशेष गरी बिक्रेताको अमेजन छनोटलाई असर गर्छ। तथापि, माथि उल्लिखित कारकहरू सबैभन्दा शक्तिशाली छन्। यहाँ सबैभन्दा प्रभावकारी समाधान यो सुनिश्चित गर्नु हो कि अमेजन मार्फत तपाईंले कुनै पनि लेनदेन प्राप्त गर्नु राम्रो हुन्छ। तपाईंले ग्राहकहरूलाई सर्वोत्तम ग्राहक सहयोग प्रदान गर्न आवश्यक छ र सहयोगमा रहनु पर्छ। Source .
अमेजन पूर्ति एक अमेजन द्वारा डिजाईन गरिएको प्रोग्राम हो कि अनलाइन व्यापारीहरु लाई खुदरा उत्पादनहरु लाई मदद गर्न को लागी। यस कार्यक्रमको प्रयोग गरेर, तपाईं आफ्नो अमेजन को धेरै अमेजनको पूर्णता केन्द्रहरूको भण्डार गर्न पठाउन सक्नुहुनेछ। यसको अर्थ प्रत्येक ग्राहकले तपाईबाट उत्पादनहरू खरीद गर्छ, अमेजनले तिनीहरूलाई जहाज पुर्याउँछ। यो कार्यक्रमले तपाईंलाई आफ्नो समय बचत गर्न र तपाईंको व्यापार चलिरहेको अन्य पहलुहरूमा ध्यान दिन मद्दत गर्दछ। अमेजन शिपिंग र ग्राहक सेवा को धेरै पहलुहरु ले लेता छ साथै साथ अमेजन प्रधान सदस्यहरु लाई आफ्नो उत्पादनहरु को पहुंच को विस्तार गर्छन, र एक किन्क्स बक्से जीतने मा मदद।
तपाईंको उत्पादनहरु लाई बनाउन को लागि सुझाव TOP Search Amazon
उत्पादन को समीक्षा
सकारात्मक उत्पाद समीक्षा अमेजनमा तपाईंको उच्च श्रेणीको लागि आवश्यक छ। यो ध्यान दिइनेछ कि हामी तपाईंको उत्पादन पृष्ठ सूचीमा समीक्षाहरूको बारेमा कुरा गर्छौं, तर तपाईको बिक्रेता प्रोफाइलमा प्रतिक्रियाहरूको बारेमा होइन। अन्तिम अमेजन एल्गोरिदम अपडेट पछि, प्रयोगकर्ताहरूले समीक्षाहरू उपहारहरू, छुटहरू, र फिर्तीमा फर्किने अनुमति प्रारम्भ गर्न निषेध गरिएको छ। यही कारणले तपाइँलाई समीक्षात्मक रूपमा समीक्षा समीक्षा गर्न आवश्यक छ। यो गर्ने सबै भन्दा राम्रो तरिकाहरू तपाइँको ग्राहकहरूलाई उत्तम खरीदारी अनुभवको साथ प्रदान गरेर। सकारात्मक उत्पादन समीक्षाहरू उत्पन्न गर्न तपाईंको उत्कृष्ट प्रयास गर्नुहोस् किनकि तिनीहरूले उच्च स्तर निर्धारण र अधिक खोजी ट्राफिकको नेतृत्व गर्छन्, र त्यस पछि थप अर्डरहरू र बिक्री।
तपाईंको शीर्षक खोज सर्तहरु लाई उत्पाद शीर्षक, विवरण, र बुलेट अंकहरुमा सम्मिलित गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ। सर्वप्रथम, तपाइँले खोजशब्द अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ र तपाईंको सूचीबद्ध पदोन्नतिको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन तपाईंको व्यापार खोज सर्तहरूको लागि सबै भन्दा सान्दर्भिक खोज्न आवश्यक छ। दोस्रो चरणमा, तपाइँ यी कीवर्डहरू रणनीतिक रूपमा तपाईंको शीर्षकमा र वर्णन गर्न आवश्यक छ कि तपाईंको सूची राम्रोसँग अनुकूलित बनाउन र अमेजन खोजी परिणाम पृष्ठमा देखिने। तथापि, तपाईंले आफ्नो सूचीमा कीवर्डहरूसँग हालै नै डेट गर्नु हुँदैन जुन अहिले अमेजन एल्गोरिथ्म होशियार हुनुभयो र तपाईलाई दण्डित गर्न सकिन्छ। यही कारणले तपाईंको शीर्षक प्राकृतिक, सटीक र सिर्जनाकर्ता बनाउन खोज परिणामबाट यसलाई क्लिक गर्न बनाउँदछ। आफ्नो खोजशब्द अनुसन्धान अभियान को सरल बनाउन को लागी, तपाईं एक स्वचालित सुझाव उपकरण जस्तै Google Keyword Planner या Amazon Keyword Tool को उपयोग गर्न सक्छन्।
राम्रो अनुकूलित उत्पादन सूचीबद्ध
एक राम्रो अनुकूलित उत्पादन सूचीले तपाईंलाई दीर्घकालिक बिक्री जित्न मद्दत गर्न सक्छ। हाम्रो अघिल्लो लेखहरूमा, हामीले विस्तृत ट्युटोरियललाई कसरी तपाइँको सूचीबद्ध कुशल बनाउन सक्छौं। यसैले यहाँ म केवल आधारभूत उत्पादन सूची अनुकूलन कारकहरू गणना गर्न जाँदैछु जसले सकारात्मक रूपमा तपाईंको क्लिक-मार्फत दर र रूपान्तरणलाई असर गर्न सक्छ:
विश्वसनीय र आकर्षक ब्रान्ड नाम;
व्याख्यात्मक उत्पादन शीर्षक;
सम्पूर्ण उत्पादन विवरण सबै आवश्यक उत्पादन सुविधाहरू र स्पष्ट लाभहरू सहित;
उचित बुलेट अंक;
गुणस्तर को तस्वीरहरु को जूम को क्षमता संग चित्रहरु;
दायरा अमेजनका ग्राहकहरु द्वारा निर्धारित को लागी उनि के जस्तै महसुस गरिन्छ यसमा खर्च गर्नुहोस्। तपाईंको मूल्य उचित हुनुपर्दछ र औसत बजार प्रवृत्तिमा आधारित हुनुपर्छ। यो मौसमी रूपमा वा तपाईंको उत्पादनको नयाँ सुधारिएको संस्करणको उपस्थितिको साथ बढ्न वा घटाउन सक्छ। तपाईंको मूल्य अत्यन्तै कम हुनुपर्दैन किनभने यसले तपाइँको सम्भावित ग्राहकहरूको गुणस्तरका मुद्दाहरू बुझ्न सक्छ। यही कारणले तपाईको आलाको प्रमुख उत्पादनमा अभिमुखीकरण गर्ने प्रयास गर्दछ।